08-26-2008 05:38 PM #1
I want to write in Myanmar in this forum. I feel very shy because most of the people in this forum are using in Myanmar. But, I can’t use it. :&#039;( :&#039;( :&#039;(
I want to practice Myanmar Typing. But, I have some confused things. :-X :-X
How many Myanmar fonts are there?
Which one should I practice?
How long will it take to practice Myanmar Font?
Is there any software, like typing tutor, for Myanmar Font?
How should I practice it?
Is there the best way so that I can use Myanmar Font without taking so much time?
I hope I will get the best advice from this forum. ;D ;D ;D ;D
08-26-2008 06:43 PM #2
Thanked 157 Times in 99 Posts
ပြန်စာ -> How should i practise myanmar font?
မြန်မာဖောင့်ကတော့ ကျွန်တော့်တုန်းကလည်း ဒီလိုပါပဲ.. ;D
ဖိုရမ်မှာ ရောက်တုန်း ၀င်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က link တွေကနေတဆင့် ဖတ်ပြီး လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ..
အိမ်မှာမိမိဘာသာ typing tutor နဲ့ လေ့ကျင့်ချင်ရင်တော့ ဖိုရမ်ထဲက ဒီနေရာလေးမှာ တင်ထားပေးတာရှိပါတယ်..
PM ပို့မယ်ဆိုရင် Click here
08-27-2008 12:07 AM #3
Thanked 1,717 Times in 396 Posts
မြန်မာ ဖောင့်တွေကတော့ တော်တော်လေးကို များပါတယ်..
ရိုးရိုးဖောင့်တွေ(wininwa,cecolletion, etc) ၇ယ် UNICODE font တွေရယ် ရှိပါတယ်..standard font တခုလောက်တော့ အခုချိန်ထိ STABLE ကျကျ မပေါ်ထွက်လာသေးပါဘူး...
ရိုးရိုးက ရှိသမျကို သူ့ ဖောင့် ပုံစံပြောင်းပါတယ်.. ယူနီကုတ်ကကျတော့ english တဖက်..မြန်မာ တဖက် ကြိုက်သလိုပြောင်းရေးလို့ရပါတယ်..
လက်တင် ဖောင့်တွေကိုပါ.. ပြောင်းနိုင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ခုလောလောဆယ်ထိတော့ font type အားလုံးကို unicode font တွေမှာ မပါနိုင်သေးပါဘူး
မှာ charmap လို့ရိုက်ပြီး myanmar unicode တွေ ( mymyanmar, zawgyi ,etc) တွေကို သေသေချာချာ ကြည့်ကြည့်ပါ.. arial ကဲ့သိုသော ဖောင့်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်ကြည့်ပါ .ခြားနားချက်တွေ လေ့လာနိုင်ပါတယ်..
UNICODE က MEMORY ယူတာ ပိုများပါတယ်...
လောလောဆယ်တော့ ၀ဘ်ဆိုက်တွေမှာ အသုံးများဆုံးက ဇော်ဂျီဖောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်..
သူကိုပဲ ရိုက်ကျင့်လိုက်ပေ့ါ... ဒီဖိုရမ်မှာ ဒါကိုပဲသုံးထားပါတယ်... ဖောင့်ပြောင်းတာနဲ့ KEYBOARD LAYOUT ပါလိုက်လိုက်ပြောင်းလို့ မြန်မာတွေအတွက် ပုံသေဖောင့် မရနိုင်သေးပါဘူး... ဒါတော့ တော်တော်ဆိုးပါတယ်..
ဇော်ဂျီဖောင့်ကို တင်ပြီးတော့ ရိုက်တဲ့အခါ ctrl + shift နဲ့ ပြောင်းပြောင်းရိုက်သွားနိုင်ပါတယ်.. keyboard layout ပုံကို ကြည့်ပြီး ရိုက်ကျင့်နိုင်ပါတယ်..
ဒါမှမဟုတ် run box မှာ osk လို့ ရိုက်ပြီး enter ခေါက်ပါ.. on screen keyboad တက်လာပါလိမ့်မယ်..
အဲဒီမှာ ဖောင့်ကို ဇော်ဂျီ ပြောင်းထားပြီး ကြည့်ရိုက်နိုင်ပါတယ်...
The Following User Says Thank You to yeakharr For This Useful Post:
10-24-2008 02:21 PM #4
Thanked 918 Times in 278 Posts
PrimoPDF သုံးတာ မြန်မာစာမပေါ်လို့...
ကျွန်တော် PrimoPDF converter နဲ့ မြန်မာစာတွေကို pdf ပြောင်းကြည့်ရာမှာ
မြန်မာစာလုံးကြားထဲက ပါတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတွေပဲ ပါလာတယ်..မြန်မာစာတွေ
10-25-2008 06:10 AM #5
ရန်ကုန် ၊ မြန်မာ
ပြန်စာ -> PrimoPDF သုံးတာ မြန်မာစာမပေါ်လို့...
ကျွန်တော်သုံးတာတေ့ာ microsoft word 2007 မှာစာတွေရေးပြီး pdf fileအနေနဲ့ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
kyawminhtet488@gmail.com တွင် ကျွန်တော် အမြဲရှိနေတတ်ပါသည်။
အကြောင်းကိစ္စ တစ်စုံတစ်ရာ ရှိက ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်.....
10-25-2008 02:31 PM #6
ကျွန်တော်လဲ အရင်က PrimoPDF converter ကို မသုံးဘူးပါ ဘူး ။ ဒါပေမယ့် အမ ပြောလို့ စမ်းသုံးကြည့်တာ ။ microsoft 2007 နဲ့ စာရိုက်ပြီး pdf ပြောင်းကြည့်တာ မြန်မာ font ကောင်းကောင်းကြီး ပေါ်ပါတယ် ခမျာ ... ။ ဒါနဲ့ pdf software ကိုလိုက်ကြည့်တော့လဲ font နဲ့ ပါတ်သက်တာ ကို မတွေ့ ရပါဘူး ။ မူရင်း file ပေါ်မှာပဲ မူတည် လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် ခမျာ ။ PrimoPDF converter နဲ့ ဆိုင်တယ် ဟု မယူဆမိပါကြောင်း ..........
http://thantyin-ko.co.cc , http://itzarni48.co.cc
10-27-2008 10:43 PM #7
UTF8 ကိုလည်းမမေ့နဲ့အုန်းနော် သူကလည်းအရေးပါတယ် database တွေမှာ UTF8 ပါမှ webpage တွေလုပ်တဲ့အခါအဆင်ပြေတာနော် သူလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဘဲထင်တယ် setting မှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါ converter မှာ utf8 ဆိုတာပါလားလို့ ကျွန်တော်တို့ notepad မှာ မြန်မာလိုသိမ်းရင်တောင် ရိုးရိုးသိမ်းလို့မရဘူးလေ...........utf8 နဲ့သိမ်းမှပြန်ကြည့်ရင်မြင်ရတာ
The Following User Says Thank You to kolynn86 For This Useful Post:
10-29-2008 03:14 PM #8
Thanked 223 Times in 109 Posts
ဇော်ဂျီ ၀မ်း Installer တင်လိုက်တော့မှ ဒုက္ခ :')
ကျွန်တော့်စက်မှာ ဇော်ဂျီဝမ်း software တင်လိုက်ပြီးတော့ Page Maker ဖိုင်များ ဖွင့်မရတော့ပါ။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကူကြပါအုံး :-[
Install လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း သုံးထားတဲ့ PM ဖိုင်တွေတော့ဖွင့်လို့ရပြီး Install မလုပ်ခင်လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်တွေကိုပဲ
ဖွင့်လို့မရတော့တာ။ :-\_ အဲဒါဘာဖြစ်တာလည်း တစ်ခြား စက် ၃ လုံးလောက်စမ်းကြည့်တာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။
လောကကြီးကိုဖွဲ့စည်း - မြေ၊ ရေ၊ လေ၊ မီး
သက်ရှိဘ၀ အဓိကလူ မျှတစွာယူရ - ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ
ကျင်လည်စွာပေါင်းကူး - ရွှေ၊ ငွေ၊ ဂုဏ်၊ ရာထူး။ ။
10-29-2008 11:47 PM #9
ပြန်စာ -> ဇော်ဂျီ ၀မ်း Installer တင်လိုက်တော့မှ ဒုက္ခ :')
အစ်ကိုတော့ မတွေ့ဘူးသေးဘူးကွ ထူးခြားနေတယ်နော် အစ်ကိုဆို ရှိသမျှဇော်ဂှီအကုန်အင်စတောလုပ်ထားတယ်။ ခုတော့ ဘာမှဖြစ်ဘူး အကုန်ရတယ်။ ရှိသမျှစက်တိုင်းကွ။ ဒါဆိုလဲဖြုတ်ပြီးပြန်တင်ရင်ရော ဘာဖြစ်လဲ။ အစ်ကိုတို့ myanmar2တင်တုန်းကတော့ အချို့စက်တွေနဲ့မကိုက်တာတွေ့ရပေမဲ့
ခုတော့ မတွေ့ရသေးလူးကွ။ အဲ့သြနေတာငါ့ညီရေးတာတွေ့တော့ မေးပေးမယ်တခြားလူတွေကိုလဲ။
11-03-2008 12:31 PM #10
I&#039;ve already reinstall the Zawgyi One, but I can&#039;t open PM 7.
What should I do again, need to change any setting in PM 7?
All times are GMT +6.5. The time now is 12:03 PM.